Ịgụ Oge: 11 nkeji
Nyocha Backlink - ọ bụrụ na ejikọtara saịtị gị na saịtị nwere ikike njikwa injinị adịghị mma, ịnwere ike ịnwe ogo oge dị oke egwu. Inwe ike nyochaa olu na ogo nke njikọ ndị ahụ na-atụ aka na ngalaba gị dị oke mkpa maka nchọpụta nsogbu dị elu nke nsogbu ogo na nyocha asọmpi.
Nnyocha YouTube - a na-elegharakarị anya, YouTube bụ nyocha ọchụchọ # 2 na ụwa dịka ọtụtụ azụmaahịa na ndị na-azụ ahịa na-enyocha isiokwu na-achọ nkọwa vidiyo, profaịlụ ngwaahịa na etu esi eme.
BrightEdge SEO bụ usoro SEO mbụ iji nyefee ROI gosipụtara - na-enyere ndị ahịa aka ịbawanye ego site na nchọta ihe ọkụkụ na ụzọ atụ na amụma.
Inyocha Keywords bá »key a free isiokwu nnyocha ngw tool including á» gwá »gá» including tinyere isiokwu olu Checker, isiokwu generator, aj key okwu Keyword generator, na YouTube isiokwu generator.
Netpeak Checker - bu ihe oru nyocha nke otutu oru nyocha nke otutu nyocha SEO. Ngwaọrụ a nwere njirimara pụrụ iche nke na-enye ohere nyocha usoro nkwalite nke ndị asọmpi yana nyocha profaịlụ backlinks nke weebụsaịtị nke ndị asọmpi gị.
Nightwatch - SEO arụmọrụ tracker na nchịkọta ọrụ
Pro Rank Tracker - Nweta ihe kachasị ọhụrụ, dị mfe iji nyochaa ogo ogo na weebụsaịtị gị niile, yabụ ị nwere ike ịnọ otu nzọ ụkwụ n'ihu asọmpi ahụ ma bulie uru gị.
RankWatch - Nchịkọta ọnọdụ, nleleghachi azụ azụ, aro isiokwu, akara ọcha, ịkọ akụkọ na nyocha weebụsaịtị.
SerpYou - dị ọcha na mfe iji interface na ọ bụ ma ngwa ngwa na ezi.
SERPWoo - Nyochaa Nsonaazụ niile kacha elu 20 + Maka Keywords gị ma nweta ọkwa mgbe ndị asọmpi na-abawanye backlinks ha, akara ngosi mmekọrịta, ọkwa, na ndị ọzọ.
Siteoscope - isiokwu isiokwu, onye na-asọmpi asọmpi, nyocha mgbasa ozi mmekọrịta na akuko akpaaka.
Topvisor - Ngwaahịa Ahịa Ahịa & Nchịkọta Software Software. Gbalịa ya site na nsuso ruo 200 isiokwu rankings n'efu.
Unamo - Nweta ọtụtụ okporo ụzọ, melite ọkwa gị ma hapụ asọmpi ahụ.
Tags: onyekwadoahrefsasia seoụlọ ọrụ ikikeikikenyocha backlinkbacklink chọpụtaraọrụ backlinkbacklinkingbacklinkskacha mma isiokwu ogo ngwá ọrụkacha mma online seo ngwaọrụbing webmastersgbanye ọkụbrightoge seobrightedge na kondoktolelee isiokwu isiokwulelee isiokwu ogolelee ogolelee njin nyocha ọchụchọlelee ogo ogocolibricolibri seocolibri seo ngwaọrụnyocha asọmpicuutiodiyseoMetrik dragọnfirefox ọkwa ọkwafree isiokwu n'usorofree isiokwu ọkwa Checkerfree isiokwu ogofree isiokwu ogo ngwá ọrụfree isiokwu nsusofree ọkwa ọkwafree ọkwa trackerfreeo ọkwa n'ọkwáginzametricsgoogle isiokwu nsuso ngwá ọrụgoogle ọkwa trackergoogle seo ọkwa ọkwagoogle webmastersgshiftgshift labsgshiftlabsesi lelee isiokwu ogoinbound marketingnjikwa isiokwuisiokwu njikwa ngwaisiokwu tracker ọnọdụisiokwu ọnọdụ nsusoisiokwu njikwa ọrụisiokwu ọkwa egoisiokwu isiokwu Checker ngwá ọrụisiokwu ogo softwareisiokwu n'usoro trackerisiokwu n'usoro nsusoisiokwu n'usoro nsuso softwareisiokwu ogo egoisiokwu ogo akụkọisiokwu ogo akụkọisiokwu ogo softwareisiokwu ogo ngwá ọrụ freeisiokwu ogo ngwaọrụisiokwu ogo trackerisiokwu rankings ngwá ọrụnnyocha nyochaisiokwu aro ngwa ngwaisiokwu ngwaọrụisiokwu nsusoisiokwu nsuso ngwanrọisiokwu nsuso ngwaisiokwu nsuso ngwanjikọ-ụlọnjikọebubeebube seometa forensicsnyochaa ọchụchọ engine ogomoz ọkwa Checkernetpeak nyochanhazi ọkwa ntanetịonline ọkwa trackeronline ranking ngwá ọrụontolopeeji otu seonchịkọta peeji nkeposirankpro ọkwa trackerokwa onoduchrome n'ọkwángwá ọrụ n'ọkwán'usoro nyocha softwareọkwa nyochaisiokwu isiokwusọftụwiaọkwa trackerọkwa tracker freeọkwa tracker seoọkwa tracker softwarengwá ọrụ trackernsuso n'usoron'usoro nsuso ngwanrọn'usoro nsuso ngwan'usoro nsuso ngwanyochaa ogondenye egoogo softwaresoftware ogoogo ngwaọrụogo trackerrankinityọkwamara mmaigba ọsọugoloọmaNgwaọrụ ugoloọmaụlọ ndoziezigbo ogeakukorio seose Intelse ogonyocha ebe njin njinsearch engine ọkwa trackersearch engine n'usoro nsusosoftware search engine ogosoftware nyocha ogo ogoọchụchọ ọchụchọsemrushnyocha seoseo asiaseo akwụkwọ ọkwa ọkwaseo akwụkwọ ngwaọrụihe nchọgharịseo kamelseo isiokwu ogo ngwá ọrụseo isiokwu trackerseo isiokwu isiokwuseo njikwa ngwa ọrụseo nlekota ngwaọrụnyiwe seoseo ọnọdụ ọnọdụseo n'ọkwá Checkerseo rank monitorseo ọkwaseo ọkwa sọftụwiaseo ọkwa ọkwaseo ọkwa ngwaọrụseo ọkwa trackernsuso n'usoroseo nhazi ọkwaseo ogo ileba anyagị software nke softwareSEO softwareseo ogo ngwá ọrụseo ogo ngwaọrụseo ogo trackerSEO akụkọ softwareSEO akuko softwareseo ngwa ọrụ ọkwaseo ngwaọrụseo ngwaọrụ ọkwa ọkwaseo trackernsochi nsusoseo nsochi softwareseo nsuso ngwá ọrụseo nsuso ngwaọrụseobook ọkwa ọkwaseocheckseocheck.ioseomozseomoz proseomoz pro ngwaọrụseomoz ngwaọrụna-elekọtanyocha serpserp scanserpsser.com.comserpstatakaezeshortlistsaịtịoscopenledospyserpobere rankeronye nlekọtaakara ozi ịntanetịakara isiokwu isiokwutrack Keywordsngwá ọrụ twitterunamonnwetangwanrọ weebụwebmeupngwanrọ weebụwordtrackerIsi okwu YouTube
Nke ahụ bụ ndepụta mara mma. Naanị aga igosi ihe m ga-amụta banyere SEO!
Daalụ! Ihe SEO anyi kwesiri inye gi ihe ichoro.
Ndepụta dị ukwuu, daalụ. Mana echere m na webceo na-efu, ọ bụ usoro dị mma nke seo dị n'ịntanetị iji nyochaa ebe nrụọrụ weebụ gị wee bulie ya.
Jụụ! Anyị ga-atụkwasị ya!
Ndewo Zac, enyochare m WebCEO na nke ahụ bụ ikpo okwu desktọọpụ maka Windows. Anyị lekwasịrị anya na ngwaọrụ dị n'ịntanetị ebe a. Daalụ!
O doro anya na ọ bụ ahịa ahịa jupụtara na ya - ndepụta a bụ nanị elu iceberg! Y’oburu n’inwe obi uto ime ihe yiri ya mana akuku banyere ngwa oru nke SEO n’ulo biko biko mee ka anyi mara - anyi ga enwe obi uto inye aka n’inwe ọdịnaya na enyemaka. Daalụ Douglas
Hey, anyị na SERP ianomi dị nnọọ wepụtara mpaghara ọkwa nsuso atụmatụ. Ohere obula nke gunyere anyi Douglas? Daalụ!
Emelitere, yiri nnukwu ngwaọrụ.
Daalụ Michael! M tinye ya na listi.
Daalụ maka gụnyere WebMeUp, Douglas!
Site n'ụzọ, anyị ka gbakwunyere modul Social Media na WebMeUp. Yabụ, onye nwere ike ịsị na anyị abụghị sọsọ SEO sọftụwia ugbu a. 😉
Jun 24, 2013 na 1:01 AM
Ejirila m ngwaọrụ ole na ole iji soro ọkwa maka ndị ahịa anyị mana achọrọ m ị tụnye aka na ngwa ọrụ nwere ike soro ọkwa maka mkpụrụokwu na-akparaghị ókè. Anyi choro otu maka onu ahia e-commerce nke nwere iri puku kwuru iri puku nke akara okwu.
Jun 24, 2013 na 8:24 AM
Ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ na nha ahụ jiri Conductor, @disqus_wFlYDncKKH: disqus. Ọ bụghị ọnụ ma ọ nwere ezigbo nchịkọta na ịkọ akụkọ. I nwekwara ike ịzụta ihe odide nke ichota nke gi - ma obughi maka obi ojoo dika ndi nyocha choro igbochi oru ndia dika o kwere mee.
Ezigbo SEO Roster of Tool Douglas! WebMeUp abụrụla otu n'ime faves m. Market juru Samurai emeghi obere ndepụta?
Ahịa LXR nwere ogologo ndepụta nke nnukwu ngwaọrụ emere maka obere ndị nwe ụlọ azụmaahịa na-achọ ime SEO ha
Jul 23, 2013 na 3:21 PM
Ndepụta dị ukwuu! Fọdụ bụ ndị na-amaghị na m kwesịrị ịnwale ha. Site na ndị a ejiri m Searchmetrics kachasị, mana Cuutio kwesịrị ịdị na ndepụta ahụ, echere m (www.cuutio.com)
Aug 23, 2013 na 3:28 PM
Echere m na ị nwere ike ịlele ngwa ọrụ anyị - positionly.com. Were ya maka ogho ma chọpụta n'onwe gị 🙂 Eji m n'aka na ọ ga-ezute ụkpụrụ gị.
E wezụga nke ahụ, ahụrụ m nchịkọta dị ka nke a n'anya. Ngwa ọrụ niile bara uru jikọtara ọnụ. Mma!
Aug 24, 2013 na 6:49 PM
Daalụ Krystian! Tinye gị na ndepụta ahụ.
Ndewo ebe ahụ! great list ị nwekwara ike gbalịa seo rank monitor, ahụrụ m ya n'anya ruo ugbu a .. ha ka tọhapụrụ mbipute ọhụrụ, nke (echere m) na ọ mara mma.
Daalụ! Tụkwasị na ndepụta ahụ.
Nwere ike ị a ngwa ngwa ilekiri anyị ala-agbasa ngwọta na https://www.serpwoo.com/?
Anyị nwere ma akwụ ụgwọ na akwụ ụgwọ, yana ịnye SERP ọgụgụ isi na ọtụtụ ndabara Keywords anyị soro maka ndị otu niile.
Daalụ maka ile anya na enwere m olile anya na m nwere ike iji aka gị nyere gị aka na ngwọta anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya.
Ọ dị mma, anyị atụkwasịla ngwa ọrụ gị na listi.
Aug 15, 2014 na 2:01 PM
Ndewo, ọ dị mwute ikwu na achọtaghị ya na ndepụta nke http://rankinity.com. Ana m eji oru a n'ihi na ọ na-akwado nsuso na ozugbo.
Enwere m olileanya na nke a baara gị uru.
Aug 15, 2014 na 4:01 PM
Daalụ! M tinye ya na ndepụta!
Sep 26, 2014 na 11:01 PM
Akwa post ma ọkacha mmasị m ngwá ọrụ bụ ahrefs 🙂
Lelee Meta Forensics anya: http://metaforensics.io. Ọ bụ ngwa ọrụ dị n'ịntanetị dịka ngwaọrụ desktọọpụ 'Scrog Frog' na 'Xenu Link Sleuth'. Ọ bụ isi ihe dị iche na nke ahụ na-enyekwa nkọwapụta zuru ezu banyere ije ụlọ ọrụ webụsaịtị ma na-enye ndị ọrụ ihe ngosi gbasara nsogbu nwere ike na webụsaịtị ha.
Nnọọ Nice ndepụta SEO Ngwaọrụ… Ahụtụbeghị m tupu..Ikele dị ukwuu Douglas Karr
You nwere ike ịlele ọrụ anyị https://ranksonic.com ma tinye ya na ndepụta gị?
Anyị nwere ike inye ndị debanyere aha Marketingtechblog ụfọdụ ego discount
Ndepụta dị ukwuu! Ezigbo egwu na ngwaọrụ ndị a niile, mana ịchefuru RankScanner - jiri ya kwa izu, ma mara mma maka azụmaahịa ọ bụla, enwere ike wezuga ụlọ ọrụ m chere. Chere na o kwesịrị aha.
Jun 8, 2015 na 10:34 AM
RankSonic na-enye nsonaazụ dị egwu na obere oge maka azụmaahịa ọ bụla ma ị nwere ike soro ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke isiokwu. Da m mma. Ma nke ahụ bụ ihe azụmahịa maka weebụsaịtị m. Ọzọkwa ha nwere ọtụtụ atụmatụ dị jụụ.
Ndewo Douglas, anyị ga-achọ ịnwe ngwaọrụ anyị na ndepụta a - http://www.siteoscope.com
Jul 15, 2015 na 4:55 PM
Gbakwunyere! Ọ dị ka ngwugwu mara mma.
ọ bụ n'ezie, ma ọ bụrụ na i nwere mmasị na dashboard m nwere ike na-eje ije gị site na ya 🙂
Ezigbo ozi… .Enye nyere aka maka ndị mbido… .. Daalụ maka inye ya…
Magburu onwe, ka m ịgbatị gị liste na a free seo audit tool. http://seocamel.com
Gbakwunyere Larry! Daalụ.
Dec 29, 2015 na 10:58 PM
Na-akpali mmasị, amaghị na ọtụtụ ngwaọrụ dị n'ahịa… Ugbu a, m ga-aga otu n'otu iji chọpụta ihe ha na-enye.
Nnukwu ndepụta Douglas! I chere na ọnụọgụ SEO ga-ebelata ka ahịa na-ejupụta? Ọ dị ka ọ bụrụ na onye ọ bụla na-arụ ọrụ n'oge a.
Ntinye ego iji wulite ngwá ọrụ gị dị ala nke ukwuu, yabụ ekwetaghị m. N'ezie, anyị na-arụ ọrụ nke aka anyị ugbu a. Otú ọ dị, nsogbu bụ na ọtụtụ n'ime ngwá ọrụ ndị a agbasobeghị algọridim ahụ ka ha na-enye ozi ụgha nke nwere ike ọ gaghị arụpụta ihe ọ bụla ma ọ bụ ọbụna merụọ ụlọ ọrụ na-eji ha. Ndụmọdụ m ga-abụ ịchọrọ ọkachamara ọkachamara SEO mgbe niile na ntọala siri ike.
Echekwara na ibe ndokwa ibe m. Daalụ. Mana enwere m ajụjụ, ọ bụrụ na ị na-ekwu maka ngwa webmaster google, gịnị kpatara ị kpọtụrụghị agbụ WMT na WMT yandex? ee, ama m na maka ụfọdụ ndị google = Internet niile, mana ọ bụghị maka mmadụ niile. Amaara m ọtụtụ ndị na-eji bing eme ihe na ndabara nchọ engine.
Olesya, obu ihe ziri ezi.
Ndepụta bara ezigbo uru maka ngwaọrụ seo. Enwere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị a.
Ezigbo nwanne na nwanne niile, ị ga-achọ ịkọwa maka baclink na Alexa.com?
nke a bụ ebe nrụọrụ weebụ m:
mgbe m na-enyocha na Alexa, enwere naanị mkpokọta 2 na-ejikọ na ụlọ ọrụ weebụsaịtị m. n'agbanyeghị, enwere m ọtụtụ ike ịmepụta akaụntụ na ọgbakọ mkparịta ụka. ole mgbe ọ nwere ike na-ejikọ m wesite ọrụ. daalụ maka obiọma.
Ọtụtụ ngwaọrụ dị ukwuu. SEM Rush bụ ọkacha mmasị m ma a bịa n'ịre ahịa na Majestic / Ahrefs bụ ndị nchịkọta kachasị mma. Otu ọzọ na-amasị m bụ Mozcast. Ọ bụghị na teknụzụ ọ bụ ngwa ọrụ, mana ọ dị mma ịnwe obi ike mgbe ị na-ahụ nnukwu mmegharị na SERPs ma ị chọpụta na ọ bụghị naanị gị ma enwere mmelite kachasị na - aga - dịka enwere izu ole na ole gara aga
SEO sara mbara nke ukwuu ma amalitere m ịbụ otu. N’ezie enwere ọtụtụ ihe ịmụ. Obi na-ajọ m njọ ugbu a, karịrị akarị. Olee otu i si bido? Nwere mgbe ọ na-adị gị ka ibe ákwá hie ụra n’ihi na ị maghị na ị ga-aga nke ọma ma ọ bụ na ị gaghị enwe?
Malite na ịmepụta nnukwu ọdịnaya maka ndị na-ege gị ntị. Search bụ ọwa, ọ bụghị atụmatụ. Usoro gị kwesịrị ịbụ ịnọgide na-enye uru maka atụmanya gị na ndị ahịa gị.
Nov 8, 2017 na 9:18 AM
Nnukwu ndepụta Douglas, SERPtimizer bụ ngwa ọrụ seo niile nwere njikọ njikọta pụrụ iche na nyocha ndị asọmpi. Ọ ga-abụ ihe mgbakwunye?
Ekele Erich, gbakwunyere!
Nke a bụ ndepụta dị mma- nnukwu ngwaọrụ niile edepụtara ọnụ!
Ngwaọrụ Cocolyze.com ọ bụ ihe enwere ike ịgbakwunye? Ọ bụ a n'usoro nsuso ngwá ọrụ na ezi interface na a pụrụ ịdabere na data. Ọ ga-adọrọ mmasị ịhụ ihe gị ma ọ bụ ndị ọzọ na-eche banyere ya.
Achọpụtara m na Moz anọghị na ndepụta ahụ…? Ọzọkwa, m na-eji ụdị akwụ ụgwọ BuzzSumo maka ịlele backlinks.
Jul 31, 2019 na 1:30 PM
Chei, nwute m hapụrụ ndị ahụ. Daalụ Frank - Aga m emelite ndị a. Uzo abụọ a abaala oke uru.
Ndewo Mazhar, nke ahụ dabere na ihe ị na-achọ inweta. Na-anwa ebuli saịtị gị maka ogo ogo? Na-achọ ịsọ mpi na nyocha akwụ ụgwọ? Na-achọ ime ka saịtị gị dị ngwa? Na-achọ ime nyocha ndị asọmpi? Gịnị bụ ebumnobi gị?
Nkwado m ga-amalite Njikwa Nchọta Google (n'efu) ebe ị nwere ike ịdebanye aha na saịtị ahụ ma nyochaa nsogbu ọ bụla, jiri Nghọta Pagespeed iji melite saịtị gị ịrụ ọrụ (n'efu) ị nwere ike ịchọrọ ịme ihe SEO nyocha. Maka nke ahụ, ana m eji ya SEMrush.
M na a na-eji ahrefs na Moz Free SEO Ngwaọrụ na echere m na ndị ahụ ga - enwerịrị SEO ngwa ọrụ onye ọ bụla kwesiri ịnwa. Daalụ maka ọmarịcha edemede. Ọ ga-amasị m ịnweta ya dịka m bu n'obi iwebata oghere ọhụrụ nke ozi weebụsaịtị anyị ( Doodle Digital ). Daalụ!
N'ime izu ole na ole gara aga, ana m achọ ezigbo ngwá ọrụ SEO iji soro SEOperformance m. Imirikiti ngwaọrụ ndị ị kwuru bụ ihe ọhụrụ nye m. Daalụ maka ịkekọrịta egwu egwu isiokwu ngwaọrụ. N’oge na-adịbeghị anya, ejiri m ihe nnabata SERP, Serpple. I nwekwara ike inyocha ngwá ọrụ iji soro isiokwu ogo data. Na mgbakwunye, ị nwere ike ide edemede na-akọwa uru dị n'iji SERP Checker tool for SEO na ụbọchị ndị na-abịanụ. Nke a nwere ike inyere ndị na-ere ahịa dijitalụ dịka m aka.
Daalụ Rachael, agbakwunyela m Serpple na ndepụta ahụ!